Ana Alcolea. «Mashoko uye mavara anondishamisa pandinonyora» | Zvazvino Zvinyorwa
Ana Alcolea. «Iwo mazwi uye mavara anondishamisa pandiri kunyora»
Mifananidzo. (c) Unyanzvi hwekutaurirana
Ana Alcolea munyori anobva kuZaragoza ane basa rakareba zvese mukudzidzisa Mutauro uye zvinyorwa sekuburitswa kwemabasa ekudzidzisa, literatura mwana nehudiki (akahwina iyo Cervantes Chico Mubairo muna 2016) uye pakupedzisira, novelas Chemhondoro Pasi peshumba yeSaint Mark o Chirahwe chaMargarita, Iyo inopa izvozvi. Ndatenda kwazvo nenguva yako, mutsa uye kuzvipira kweizvi indavhiyu.
Ana Alcolea. Kubvunzurudza
ANA ALCOLEA: Pamwe bhuku rekutanga randakaverenga raive Vatatu Musketeers, naAlexander Dumas, muchinyorwa chine mifananidzo chevana. Zvichida ndiyo yekutanga yandinorangarira. Bhuku rekutanga randakanyora raive Roketi rakarasika, novel yakaiswa mukati Africa, mune iyo mukomana anotsvaga medallion yaipfekwa nababa vake paakafira mutsaona yendege musango.
AA: Mabhuku maviri akasiyana kwazvo, Jane eyre, naCharlote Brönte, yenyaya yake isingaenderane nerudo, uye nenzvimbo dzake dzakasiyana zvakanyanya neidzo dzandaigara. Y Bvunza Alicia, iyo yakaburitswa sedhayari chairo remusikana achiri kuyaruka anogara munyika yezvinodhaka. Ndakafadzwa kwazvo.
AA: Uyu mubvunzo wakaoma kupindura. Kune zvakawanda uye zvinonakidza kwazvo: kubva Homer, Sophocles, Cervantes y Shakespeare a Tolstoy, Herink Ibsen, Sigrid Kusagadzikana, Dostoevsky, naThomas murume, Stefan bazi. Kubva panguva iripo ndinogara Juan Marsé, Manuel Vilas, Mauricio Wiesenthal naIrene Vallejo.
AA: A. Don Quijote weLa Mancha, izvo zvatinonyatsogadzira zuva rega rega, uye kana zvisiri, tinotadza. Icho chimiro icho anotsvaga kuita yehupenyu hwake basa rehunyanzvi, chimwe chinhu chakanaka kwaari uye kune vamwe. Anoda kuve muchinda munoverengeka uye zuva rega rega anogadzira chimwe kana zvimwe zvezvikamu zvinonakidza kuitira kuti pfungwa yake irarame. Rarama pakati penhema uye chokwadi, sezvatinoita tese. Cervantes aiziva kuona uye kuiratidza zviri nani kupfuura chero munhu.
AA: Ndisati ndamboteerera kune opera yekunyora. Asi ikozvino ndanyora kazhinji kunyarara, kunyanya panguva ino, yandinogara munzvimbo yakanyarara kwazvo. Ndinotarisa zviri nyore kwazvo chero kupi. Ini ndoda kutanga kunyora zvinyorwa zvangu mu katsamba, neruoko. Ipapo ini ndinopfuurira nekombuta, asi ndinonakidzwa nenguva iyoyo yekutsvedza peni, nhema, pamusoro pepepa uye nekuona mameseji ari kubuda ayo anozoita nyaya.
Uye verenga, Ndaingoverenga pabepa chete. Handina rubatsiro rwemagetsi kuverenga mabhuku. Ini ndinoda kupepeta nekubata bepa. Saka ndinoziva kuti nhoroondo inogara iri munzvimbo yayo. Pachiratidziro zvinoita sekunge peji rikashanduka, mazwi uye zvavanoreva zvaizopera.
AA: Mangwanani mushure mekudya kwekuseni uye nekapu yetii ichiri kupisa. Kana ndiri kumba, ndinonyora pa hofisi, nehwindo kuruboshwe kwangu. Kunze kwemusha, ini ndinowanzo nyora mukati zvitima uye mu ndege pandinofamba.
AL: Chii chatinowana mune yako nyowani nyowani, Chirahwe chaMargarita?
AA: Chirahwe chaMargarita Ndicho rwendo kune zvazvino uye zvakapfuura yemutambi mukuru, uyo anodzokera kumba kwemhuri yake kuti anoiburitsa mushure mekufa kwababa vake. Zvinhu, mapepa, mabhuku anomutora kuenda kunguva yaaive chikamu chemusha iwoyo, mukati memakore eShanduko. Haisi inoverengeka isingagutsikane nenguva, kana nehukama hwemhuri, kunyangwe nemutambi mukuru, anovawo murondedzeri. Kwete magamba mune mbatya yaMargarita. Vanhu chete. Kwete zvakare kana kushoma pane vanhu chete.
AL: Chero mamwe marudzi aunofarira kunze kwenhoroondo yenhoroondo?
AA: Ini ndinowanzoverenga inoverengeka padhuze kupfuura nhoroondo. Ndiri kufarira mavara uye nhaurirano yavo nenguva yavo, chinova chikamu chehupenyu hwavo mamiriro. Ndakaverengawo nhetembo, nekuti ini ndinowanzozviwana ndiri mazviri.
AA: Ndiri kuverenga a biography yemunyori weNorway Sigrid Undset, iyo yakahwina Mubayiro weNobel weMabhuku muna 1928. Ndiri kunyora bhuku rinogona kutumidzwa zita Hupenyu hwangu mukamba nekuti ndanga ndichigara kwemwedzi minomwe makumi mashanu muzana yenguva mune imwe kabhini iri yega mumakomo, mu Norway, uye ini ndoda kutaura hukama hwangu nemasikirwo: manzwi erwizi, zevezeve remashizha emiti, shanduko yemwaka ... Ini ndinofunga tinofanirwa kugara zvakanyanya mukutaurirana nekutaurirana nemasikirwo, uye kunyora bhuku iri kuri kundidzidzisa kutarisa nekuterera zvimwe uye zvirinani.
AA: Uyu zvakare mubvunzo unonetsa kupindura. Ndinonzwa ndakakomborerwa zvikuru nekuti kusvika parizvino ndakaburitsa zvinenge zvese zvandanyora. Ndiri kuona kuti kune vanyori vazhinji vanoda kutsikisa nekukasira, nekuchimbidza, uye iri ibasa raunofanira kuve nemoyo murefu. Unofanira kunyora zvakawanda. Uye pamusoro pezvose iwe unofanirwa kuverenga zvakawanda.
Ndakatanga kunyora ini ndaive nemakore anopfuura makumi matatu neshanu ekuberekwa, uye muparidzi wekutanga wandakatumira yepakutanga haana kuzvida. Iyo yechipiri hongu, uye pamwe nayo ine anodarika makumi matatu edhisheni. Ndine rungano rwakaenda kuburikidza nevaparidzi vaviri vasina kuriburitsa, wechitatu akariburitsa, uye ndinofara naro. Unofanira kuziva kumirira. Kana bhuku racho rakanaka, rinowanzopedzisira rawana nzvimbo yaro. Kazhinji.
AA: Nguva yacho kushushikana mupfungwa kune wese munhu, Eheka. Ini ndave nehunyanzvi kwazvo panguva ino uye ndanyora zvinhu zvakawanda, umo musoro wedenda wakaziviswa ndisina kuve nechido chekutanga. Kana ini ndatanga novel ini handizive kuti chii chichaitika, iyo novel iri kugadzirwa uye dzimwe nguva nyaya dzawanga usina pakutanga dzichipfuura.
Ini ndinotenda kuti zvinyorwa zvakafanana nehupenyu: isu tinoziva kuti zvichapera, asi isu hatizive kuti sei kana riini. Iwo mazwi uye mavara anondishamisa pandiri kunyora. Ini ndinofunga izvo zvakakosha kwazvo mumanovel angu. Margarita andishamisa zvikuru achinyora nyaya yake mu Chirahwe chaMargarita. Ndakadzidza zvakawanda nezvake uye nezvangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Ana Alcolea. «Iwo mazwi uye mavara anondishamisa pandiri kunyora»
César Pérez Gellida: "Zvakaoma kuwana raramo kubva pabasa iri"